Ogaden News Agency (ONA) – Ciidwanaagsan dhamaan shacabka S.Ogadenya iyo caalamka Islaamka
Ciidwanaagsan dhamaan shacabka S.Ogadenya iyo caalamka Islaamka
Anigoo ku hadlaya magacayga, magaca Golaha Fulinta, Golaha Dhexe, Taliyayaasha iyo Naftood-hurayaasha CWXO iyo dhamaan xubnaha iyo taageerayaasha Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) waxaan munaasabaddan ciida soonfur ugu hambalyaynayaa shacabka Somalida Ogadeyna iyo dhamaan umadda Islaamka. Waxaan Ilaahay inooga baryaya inuu naga aqblao soonkii iyo qiyaamkii. Waxaa kaloon Ilaahay ka baryayaa inuu Ilaahay ka dul qaado umadda Somaliyeed abaaraha ku habsaday Geeska Afrika.
Bishii Ramadaan waxay CWXO ku qaadeen cadawga sidii caadada u ahayd dagaalo xoogan oo isugu jira noocyada hawlgal ee ciidanka. Waxaa Ilaahay mahadii ah in hawlgaladaa ay ka soo hooyiyeen CWXO guulo naafeeyay ciidamada gumaysiga, waxayna kaga furteen hub iyo saanad kala duwan. Waxaan Ilaahay uga baryayaa dhamaan xubnaha Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya ee iyagoo sooman dagaaladaa qaaday inuu Ilaahay ka aqbalo midkoodii shahiiday oo guusha uu u yaboohay xaqlaha uu gaarsiiyo.
Waxaan dhamaan xubnaha iyo taageerayaasha iyo shacabka S.Ogadenya ee gumaysiga ku jira kula dardaarmayaa inay isgarab taagaan naftood-hurayaasha oo hiil iyo hooba u huraan. Waxaa kaloon kula dardaarmayaa inay ogaadaan in aanay ku imaanin xoriyadda iyo sharaf inuu ugu noolaado qofka aadanaha dalkiisa waxaan ahayn halgan adag. Taariikhda shucuubtii soo xorowday dib ha u fiiriyeen. Sabirka iyo adkaysi iyo halgan dheer umbaa guusha lagu hantaa. Gumaysi naxariis laawa ah oon xurmaynin sharci iyo qaanuun toona ayaa dalkii haysta wuxuuna doonayaa inaan gunnimadaa ku abaadno. Shacabka S.Ogadenya waxay doonayaan inay iyagoo xor ah la noolaadaan shucuubta caalamka oy doorkooda ka qaataan horumarinta iyo xasiloonida gobolka iyo guud ahaan caalamka. Qof aan xor ahayna ma qaadan karo doorkaa.
Ugu dambayn waxaan Ilaahay ka baryaynaa inaan ciidan ciideeda kula ciidno caalamka anagoo xor ah oo ku nool nabadgalyo iyo barwaaqo. Ciid Wanaagsan.